Dowladda Federaalka Somalia oo joojisay lacagihii ay siin jirtay Maamullada Dalka ka jira - Latest News Updates
Dowladda Federaalka Somalia oo joojisay lacagihii ay siin jirtay Maamullada Dalka ka jira
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhawaan hakisay lacagihii ay bil walba siin jirtay Maamul-goboleedyada ka jira dalka. Qoondada lacag bileedka la siiyo Maamullada dalka ka jira ayaa gaareysay $150,000, waxaana lacagtan ay toos ugu dhaceysay jeebka Mas’uuliyiinta maamul goboleedyada.
Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Somalia ayaa dhowaan kusoo rogtay in Maamul-goboleedyada dalka ay keenaan xisaab xirka lacagihii horay loo siiyay, kaddib markii ay su’aal badan ka timid qaabka lacagahaas lagu maareeyay.
Sidoo kale, Wasaaradda Maaliyadda Somalia ayaa ka dalbatay Wasaaradaha maaliyada maamul goboleedyada inay keenaan miisaaniyadda ay ku shaqeynayaan, si qoondada lacageed ee dowladda bil walba bixiso ay qeyb ugu noqoto.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in la hakiyay lacagaha si toos ah maamul goboleedyada loo siin jiray, balse maamulka Hirshabeelle ayaa ahaa maamulkii u horeeyay ee laga hakiyay lacagahan bilihii June iyo July, xilligaas waxaa madax ka ahaa Madaxweynihii hore Cali C/llaahi Cosoble.
Ugu dambeyn, Dad fara badan ayaa aaminsan in arrintan ay yareneyso awoodaha xad dhaafka Madaxda dowlad goboleedyada qaar oo ah kuwo xilligan siyaabo kala duwan u adeegsada lacagaha qoondada bilaha ee dowladda Dhexe bixiso.